Odayaasha Dhaqanka ayaa waxay bilaabeen inay qaarkood dhaliilaan qorshaha uu Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Xasan Cali Khayre u jooggo Magaalada Dhuusamareeb.
Nabadoon Maxamed Xaashi oo ka soo muuqday Warbaahinta gudaha ayaa tilmaamay in Ra’iisal Wasaaraha iyo kooxdiisaba ay doonayaan inay dhisaan Galmudug hoos-tagta Villa Somalia, isla-markaana aanay doonayn Galmudug matasha dadka deegaanka.
Qaylo-dhaanta Odayaasha Dhaqanka ayaa waxay salka ku haysaa in la bedelay inta badan saxiixe-yaashii Galmudug ee 2015, iyadoona lagu soo bedelay kuwo ka shaqaynaya danaha Villa Somalia iyo inay Villa Somalia ku hawlan tahay, sidii ay Odayaasha Dhaqanka uga saxiixan laheyd liiska Xildhibaano ay wadato.
Odayaal kale oo uu ka mid yahay Nabadoon Cabdi Cali Guure ayaa Odayaasha Dhaqanka ee ku hawlan soo xulista Xildhibaanada cusub uga digay inay saxiixaan liiska ay ku qoran yihiin magacyada shakhsiyaadka ay soo xushay Villa Somalia.
Khilaafka wiiqay doorashada ka socota Magaalada Dhuusamareeb oo marba heer taagnaa ayaa waxaad arki kartaa inuu gaaray heerkii ugu sareysay, waxaana laga cabsi qabaa inuu fashil ku yimaado doorashada, haddii aanay dowladdu la shaqayn dadka deegaanka.